चिनियाँ अन्तरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपण जमीन मा जीवन खर्च गर्न सक्दछ
चिनियाँ अन्तरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपण जमीन मा जीवन खर्च गर्न सक्दछ - BGR
By TELES RELAY	 On मई 1, 2021
तपाईंले सायद यो हप्ता सिक्नुभयो कि चीनले सफलतापूर्वक पहिलो ब्रान्ड सुरू गरेको छ जुन एकदम नयाँ अन्तरिक्ष स्टेशन बन्ने छ। मोड्युल बिहीबार प्रक्षेपण गरिएको थियो, र चीनले यसको शक्तिशाली लांग मार्च B बी रकेटको प्रयोग गरी सामग्रीलाई आकाशतर्फ धकेल्यो। यो चिनियाँ अन्तरिक्ष एजेन्सीको लागि ठूलो दिन थियो, र यसले धेरै ध्यान आकर्षित गर्यो। दुःखको कुरा, आरम्भिक बजको हिस्सा नभएको तथ्यमा यो थियो कि चीनसँग आफ्नो रोकेट स्टेज नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय थिएन जुन अहिले पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ र बिस्तारै सतहमा खस्छ।
Comme समाचार रिपोर्टहरू, लांग मार्च B बीको केन्द्रीय चरण जसले "स्वर्गीय सौहार्द" अन्तरिक्ष स्टेशन मोड्युललाई कक्षामा राख्यो जुन हाम्रो ग्रहको वरिपरि टम्ब्बल हुँदैछ। अनियन्त्रित रोकेट घटक बिल्कुल विशाल छ, र यो गुरुत्वाकर्षण को खींचो धेरै मजबूत हुन्छ र लामो हामी वातावरण मा फिर्ता हामीलाई फिर्ता पहिले लामो हुँदैन। कहाँ टुक्रा जमीन हुनेछ? कसैलाई कुनै विचार छैन।
दिनको शीर्ष सम्झौता	सबैजना पागल छन् यो नन-स्टिक स्किललेटको बारे - अब बिक्रीमा केवल $ १$ को लागि!	मूल्यहरूको सूची:16,99 $	मूल्य:13,99 $	तपाईंले बचत गर्नुभयो:$ २..3,00० (%१%)
रकेट चरणहरू जुन भूउपग्रहमा भूउपग्रहमा उपग्रह वा अन्य अन्तरिक्ष यानहरू पठाउँदछ नियमित रूपमा पृथ्वीमा फिर्ता समाप्त हुन्छ। धेरै जसो केसहरूमा, रकेट चरणहरू प्राय: सागरमा पूर्वानुमान योग्य क्षेत्रमा हुन्छन्। केही प्रक्षेपणको परिणामले रकेट चरणहरू वेगमा पुग्दछ जसले उनीहरूलाई पृथ्वीको चारैतिर आरोहण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, तर ती प्रायः आगोको मद्दतले नियन्त्रण गरिन्छ जसले उनीहरूलाई ढिलो बनाउँदछ र फेरि हानिरहित पतन गर्दछ।सागरमा वा वायुमण्डलमा जलाउन सकिन्छ। धेरै अवस्थाहरूमा, सामग्री पुनःप्रवेशको गहन घर्षणको सामना गर्न सक्दैन र आवश्यक बाफ हुन्छ।
चिनियाँ ल Long्ग मार्च B बी को मामला मा, रकेट आफ्नो कक्षीय गति मा पुगेको छ तर तल तान्न अघि सीमित समय हुनेछ। चीनले नियन्त्रित दहन सुविधा प्रयोग गरेको देखिदैन, जसले रकेटलाई धेरै अप्रत्याशित बनायो। यसको आकारले यसलाई वायुमण्डलमा पुनःप्रवेश गर्न सब भन्दा ठूलो अनियन्त्रित अन्तरिक्ष यान बनाउनेछ, र यो सम्भव छ कि रकेट चरणको पर्याप्त मात्रा पुनर्प्रेषणबाट बच्नेछ र तल भूमिलाई असर गर्दछ।
त्यहाँ त्यहाँ एक ठूलो रकेट उडान उडान र अर्को हप्ता मा केहि बिन्दु मा वा त यो पतन जाँदै छ… कहीं। यो एकदम चाँडो सारिन्छ, प्रत्येक 90 ० मिनेट वा सो भन्दा कम पृथ्वीको कक्षा पूरा गर्दै, यसको रेन्ट्री स्थानको पूर्वानुमान गर्न लगभग असम्भव बनाउँदछ। के हामी आत्तिनु पर्छ? अहो, सायद होईन।
रकेट वास्तवमा वायुमण्डलमा जलाउनेछ र यसको अधिकतर प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा नष्ट हुने आशा गरिन्छ। यो सम्भव छ कि पुन: प्रवेशमा पनि कुनै मलबेस नहोस्, तर यदि यो भयो भने, यो सागरमा खस्नेछ। पृथ्वीसँग कुनै पनि चीज भन्दा धेरै समुन्द्र छ, र भूमिमा भत्काइएको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम छ। त्यहाँ जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई असर गर्ने सम्भावना पनि कम छ, र यदि हामी वास्तवमै प्राविधिक छौं भने, कसैलाई हिर्काउने वा चोट पुर्‍याउने सम्भावना धेरै, धेरै, धेरै कम छ। यो शून्य होइन, तर यो निकै नजिक छ।
अमेजनसँग di 60 भन्दा कमको लागि वास्तविक हीरा स्टड इयररिंगहरू छन् - र समीक्षकहरूले तिनीहरूलाई मन पराउँछन्!	मूल्य:59,90 $
माइक वेनरले विगत दशकको लागि टेक्नोलोजी र भिडियो खेलहरूमा रिपोर्ट गरेका छन्, भर्खरको समाचार र वीआर, पहिरनयोग्य उपकरणहरू, स्मार्टफोनहरू, र भविष्यका प्रविधिहरूमा प्रवृत्तिहरू कभर गर्दै।
भर्खरै, माइकले डेली डटको लागि प्राविधिक लेखकको रूपमा सेवा गर्‍यो र यूएसए टुडे, टाइम डॉट, र अनगिनत अन्य वेबसाइटहरू र प्रिन्टमा प्रदर्शित गरिएको छ। उनको प्रेम
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://bgr.com/sज्ञान/china-earth-long-march-rket-5922925/ मा देखा पर्‍यो
Smart smart स्मार्ट प्लगहरू, $ १ Amazon अमेजन क्रेडिट, $ must हुनुपर्दछ किचन ग्याजेट, अधिक - BGR
लस एन्जलसलाई पुनः आकार दिन सहयोग गर्ने एली ब्रॉड 87 XNUMX वर्षको उमेरमा मरे - मानिस